पुत्र वियोगमा परेका प्रचण्डलाई अर्को आपत -प्रचण्डलाइ अब अर्को खतरा ! अब ‘प्रचण्ड’ रहँदैनन् कि ? – mero sathi tv
पुत्र वियोगमा परेका प्रचण्डलाई अर्को आपत -प्रचण्डलाइ अब अर्को खतरा ! अब ‘प्रचण्ड’ रहँदैनन् कि ?
On ११ मंसिर २०७४, सोमबार १६:००
काठमाडौं,चर्चित हिन्दी सिनेमा शोलेको एउटा दृश्यमा जब अभिनेता सचिन गब्बर सिंहबाट मारिन्छन् र उनको लास गाउँ पठाइन्छ तब गाउँलेले जय र बिरुको विरोध गर्दै उनीहरूलाई त्यस गाउँबाट ननिकालेसम्म गब्बर सिंहले यसैगरी एक–एकजना गर्दै गाउँलेलाई मार्छ भन्दै उनीहरू त्यस गाउँका लागि बोझ भएको कुरा भन्दा सचिनको बुवाको भूमिकामा रहेका एके हंगलले भन्छन्, ‘जानते हो दुनियाँमे सबसे बडा बोझ क्या है ? बापके कन्धो पे बेटेका जनाजा !’
रबि लामिछाने माथि ट्राफिकका मुख्य हाकिम नै यसरी खनिए, हेर्नुस् भिडियोमा मुखामुख गर्छन् यी हाकिम